Isiqulatho sikhupha i-imeyile kwiPosi | Martech Zone
Ukugqitywa kukhupha i-imeyile kwiPosi
NgoLwesibini, Matshi 22, 2011 NgeCawa, ngoFebruwari 9, 2014 Douglas Karr
Xa ndisebenza e Isihlomelo (inkampani endiyincedileyo ukuqala kwaye inezabelo kuyo), amashishini ebehlala efuna umxholo oza kuwuposa. Lonke ishishini linetoni yomxholo… ngamanye amaxesha indawo yokujonga ayicacanga, nangona. Indawo eyodwa eyahlukileyo bendihlala ndiyicebisa kwifolda yabo ethunyelweyo.
Abasebenzi bakho baphendula imibuzo emininzi malunga nethemba kunye nabaxumi ngokufanayo… imini yonke. Amathuba kukuba ukuba elinye ithemba okanye umxhasi ujonge impendulo kumbuzo, kusenokwenzeka ukuba kukho amashumi, amakhulu okanye amawaka abanye abantu phaya abafuna impendulo efanayo. Ukuba uthatha ixesha lokuyila umyalezo ngononophelo nge-imeyile… kutheni ungaphindi uyiphendule impendulo yeposti yebhlog?
Isiqulatho sithathe umbono wokuba inyathelo liqhubeke, livumela iibhlog ngokulula bhala i-imeyile okanye uthumele enye ngqo kwiqonga labo. Xa sele ulapho, umsebenzisi unokungena, ayichukumise, okanye ayingenise ngqo kumlawuli ukuze apapashe. UChris kunye neqela lakhe eCompendium benza umsebenzi omkhulu… ukuhlala benyanisekile kumbono omtsha kaChris wento ezakwenziwa sisigwebo… thatha umxholo ukusuka naphi na ukuya naphi na.
Ndizakumisa ngeCompendium kutyelelo olude olungaphaya ngomso! Ndizakube ndikroba ezinye zeembono ezibalekayo zokuvela kweqonga. Kukhulu ukubona umlilo esiswini sabo!
Iindlela ezi-3 zokuBhala ngokuSebenzayo